Kidnapping sy fanafihana mitam-piadiana : " Wanted " ry Faneva, Tida kely, Princy, Andry Banga, Veniste -
AccueilRaharaham-pirenenaKidnapping sy fanafihana mitam-piadiana : » Wanted » ry Faneva, Tida kely, Princy, Andry Banga, Veniste
17/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Andry Colbert, Andry Banga , Mahandry Jean Christian, Mika Be loha, Boli, Lamà, Mahatondra Faneva, Veniste, Sola, Andriambololona Princy, Mainty Bartelemi na Tida kely dia isan’ireo karohina amin’ny fakana an-keriny sy fanafihana mitam-piadiana mahery vaika. I Sola, dia efa nohantintraterina teto ny fikarohana azy, isan’ireo jiolahy raindahiny niketrika ny “kidnapping” niseho teny Isotry sy Ivandry. Ny sakaizany no nahazoan’ireo mpitandro filaminana ny mombamomba azy sy ireo asa ratsy izay nandraisany anjara. I Faneva indray dia “administrateur civil ”, ary zandary ihany koa teo aloha izao lasa raindahiny amin’ny resaka fakana an-keriny izao. Tsy vaovao amin’ny rehetra raha ny momba an’i Làma, mpaka an-keriny ikoizana ary efa nifampitadiavan’ny polisy nanomboka ny taona 2014, ka hatramin’izao fotoana izao. Tida kely na Bartelemi mainty kosa dia ekipa mpiray petsapetsa tamin’i Fredo, izay lohandohan’ny mpisorona tamin’ny raharaha fakana an-keriny an’i Annie sy Arnaud tany Toamasina ny voalohandohan’ny taona 2016. Isan’izy ireo olon-dratsy ireo ihany koa i Princy izay voarohirohy tamin’ity asa ratsy ity , ary namoahan’ny polisy misahana ny ady heloka bevava “avis de recherche” , nanomboka ny 02 jona 2016 lasa teo.
Tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo ifampitadiavana ihany koa i Veniste, nanomboka ny taona 2015. Efa eo am-pelatanan’ireo polisy avokoa ny mombamomba azy ireo, ary saika efa hain’izy ireo tsianjery mihitsy satria ankoatra ny maha- jiolahy ikoizana azy ireo eo amin’ny resaka fakana an-keriny sy ny fanafihana mitam-piadiana mahery vaika toa ny basy dia efa mpamerin-keloka avokoa ny ankabeazan’ireto mpanao fanafihana sy “kidnapping” voatanisa anarana ireto. Heverina, fa antony goavana mbola mampirongatra ny raharaha kidnapping eto an-drenivohitra sy any Toamasina ny mbola tsy hahatratrarana sy hahafantarana ny toerana hisitrihan’ izy ireo. Isan’ny efa voatonontonona tamin’ilay raharaha fakana an-keriny karana tompon’ny tranombarotra Caromad teny Tanjombato ohatra ny anaran’i Sola. Ahiana ho mbola atidoha niketrika ny fanaovana kidnapping an’i Nourbay Sefoudine tao Toamasina farany teo ihany koa, i Tida kely sy ry Mahandry Jean Christian. Isan’ny lohandohan’ny mpisorona avokoa izy rehetra ireo ary mitovy ny heloka hanenjehana ireto farany. Efa maro ireo tratra sy maty voatifitr’ireo manam-pahefana ary efa betsaka toraka izay ihany koa ny fitaovam-piadiana toa ny basy, efa saron’ireo polisy teny amin’ireo olon-dratsy ireo. “Betsaka ireo manome tsiny hoe mamono olona ny polisim-pirenena nefa antony iray tsy maintsy handraisanay izany fepetra izany ny fanoherana hataon’ireo jiolahy amin’ny fotoana hisamborana azy ireo”, io no fanampim-panazavana nentin’i Kaomisera Ostrom Whenss, lehiben’ny sampana mpanao fikarohana misahana ny ady heloka bevava etsy Anosy momba ity raharaha fakana an-keriny sy fanafihana mitam-piadiana mahery vaika ity .